Vietjet ကို အခမဲ့နီးပါး စီးနင်းပြီး ဗီယက်နမ်ရိုးရာ စားသောက်ဖွယ်ရာ စစ်စစ်များကို ခံစားလိုက်ပါ | MoeMaKa Burmese News & Media
နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့ ရိုးရာဟင်းလျာတွေဟာ အဲဒီနိုင်ငံရဲ့အရေးပါတဲ့ အရာတွေထဲက တစ်ခုပါ။ နိုင်ငံသားတွေ၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ တန်ဖိုးထားမှုတွေကို ဖော်ပြနိုင်တဲ့ အရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံရဲ့ ရိုးရာ အစားအစာများဟာ ကမ္ဘာမှာ အကျော်ကြားဆုံး စားသောက်ဖွယ်ရာတွေထဲမှာ အပါအဝင်ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတကာမှာ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး စားသောက်ဖွယ်ရာစာရင်းတွေ ထုတ်ပြန်တိုင်း အကြိမ်ကြိမ်ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဆို ဗီယက်နမ် ဟင်းလျာတွေက ဘာကြောင့် ကျော်ကြားရပါသလဲ။ ဒီလိုကျော်ကြားရတဲ့ အကြောင်းက အများကြီးရှိပါတယ်။ အများသဘောတူညီကြတာကတော့ ဟင်းလျာတစ်ခုမှာ အရသာတစ်ခုထဲက ထိုးထွက်နေတာမျိုး မဟုတ်ဘဲ အရသာပေါင်းစုံကို ပေါင်းစပ်ထားတာကြောင့်ပါ။ တစ်ခါ ကိုက်စားလိုက်တဲ့ အချိန်မှာ နံနံပင် ဒါမှမဟုတ် ဂျင်းရဲ့ အရသာကို ခံစားရပေမယ့် နောက်တစ်ကြိမ်မှာတော့ ပင်စိမ်း သို့မဟုတ် ကြက်သွန်မြိတ် အရသာကို ခံစားနိုင်မှာဖြစ်လို့ ဝါးစားလိုက်တဲ့ အချိန်တိုင်းမှာ မတူညီတဲ့ အရသာကို ရရှိတဲ့ အတွေ့အကြုံကို ခံစားရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဟင်းလျာတွေ မှာ ပါဝင်တဲ့ ချိုချဉ်ငံစပ် Umami အရသာတွေကို သမမျှတအောင် ပေါင်းစပ်ထားပါသေးတယ်။
“Bánh” ဆိုတဲ့ ဟင်းလျာဆိုရင် ဆန်နဲ့လုပ်ထားတဲ့ ကိတ်မုန့်တွေနဲ့ ထမင်းလိပ်တွေ (bánh cuốn and bánh giò) တွေပါဝင်ပါတယ်။ အခြား ထူးခြားတဲ့ ဟင်းပွဲတစ်ခုကတော့ “Bún” လို့ ခေါ်တဲ့ အမျိုးအစားစုပါ။ အဲဒီထဲမှာ ဆန်ကြာဇံ bún chả, bún bò Huế တို့လို ဝက်သားပေါင်း ပါဝင်တာမျိုးရှိသလို bún cá လို့ခေါ်တဲ့ ခေါက်ဆွဲပြုတ်ပါဝင်တာလည်း ရှိပါတယ်။
Phở ဟာ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံရဲ့ ကိုယ်စားပြုအမှတ်အသား စားစရာပါ။ Phở မှာ ဆန်ခေါက်ဆွဲသားအပြား ပါဝင်ပြီး အသားကို အခြေခံဖန်တီးထားတဲ့ စွပ်ပြုပ်ထဲမှာ အမဲသား ဒါမှမဟုတ် ကြက်သားပြား ပါးပါးလေးတွေကို အပေါ်မှာ ထည့်သွင်းထားပါတယ်။ ချိုချဉ်ငံစပ် အရသာတွေကို ညီညီမျှမျှ ထည့်သွင်းထားတာကြောင့် တစ်ခါ စားဖူးသူတိုင်း နှစ်ခြိုက်ကြပြီး စွဲလမ်းမှုအရသာဟာ လူအများကြား အလျှင်အမြန် ကူးစက်သွားစေလောက်အောင် ကောင်းပါတယ်။
ခရီးကုန်ကျစရိတ်တွေအတွက် စိတ်ပူနေပြီလား။ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ အဖြေရှိပါတယ်။Vietjet နဲ့ သုည ကျပ်မှ စတင်ပြီး ဗီယက်နမ်သို့ ပျံသန်းလိုက်ပါ။ ဗီယက်နမ် ဟင်းလျာတွေကိုခံစားလိုက်ပါ။
www.facebook.com/vietjetmyanmar ကို ၁၁း၀၀ မှာ ၁း၃၀ အတွင်း သွားရောက်ပြီး Vietjet ရဲ့ “Fly it & Like it” မှာ ပါဝင်လိုက်ပါ။မြန်မာနိုင်ငံက ခရီးသွားများအနေဖြင့် 09 960 7048 18 call center သို့ ဆက်သွယ်နိုင်ပြီး Yuzana Business Tower ပထမထပ် #01-06 AVIAREPS Myanmar လက်မှတ်အရောင်းဌာန၊ အမှတ် ၂၅ ဓမ္မစေတီလမ်း၊ မြေနီကုန်း နှင့် ရန်ကုန် ၊ နေပြီတော်၊ မန္တလေး တို့မှ အခြားလက်မှတ်အရောင်းဌာန ၁၀၀ ကျော် တွင်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။
One Response to Vietjet ကို အခမဲ့နီးပါး စီးနင်းပြီး ဗီယက်နမ်ရိုးရာ စားသောက်ဖွယ်ရာ စစ်စစ်များကို ခံစားလိုက်ပါ
zaw aung on May 12, 2016 at 9:05 am
Good .. Myanmar vs Vietnam….
Myanmar/Burma leaders must learnalot of things from Vietnam.
* Follow good thing example: How they stop China/USA/French colonialism. How they do “Electricity 100%” in rural area ..etc.
* Not follow their problem ..eg, one party system (oppress opposition, Biggest arm buyer from Russia ..etc
ဆောင်းဝေ (နတ်မောက်) ● လူအုပ်ကြီး https://t.co/cXG1u0tt2C https://t.co/q3JbtFFs2F about 53 minutes ago ReplyRetweetFavorite